vendredi, 02 avril 2021 19:59
Taa Tense : Pruvot Messiaa Ashlan Milliards ny anaran-janany
Ora vitsy taorian’ny niterahany an’ity zazalahikely ity ilay mpanakanto vavy, Rajaonarivony Tsizaraina Nathalie Hortense na Taa Tense no nodimandry ny alin’ny sabotsy hifohana ny alahady 28 martsa 2021. Avotra soamantsara ilay zaza. Pruvot Messiaa Ashlan Milliards no natao anarany araka ny fampahafantarana nataon’i Gege Pruvot, rainy sady vady navelan’i Taa Tense, androany. Manana zoky vavy ity zaza menavava ity, zary kamboty reny ankehitriny. Natao ny alarobia 31 martsa 2021 ny fandevenana ny nofo mangatsiakan’i Taa Tense tao Ampotaka, Fokontany Ankafobalo, Kaominina Tatamalaza, Faritra Amoron’i Mania. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 01 avril 2021 10:04
« Musée de l’audiovisuel » : Hatsangana etsy amin’ny ORTM Anosy
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra ny hananganana “auditorium” lehibe afaka handray olona hatramin’ny 1500. Hisy ny fanangonana ireo vakoka rehetra nanomboka tamin’ny fijoroan’ny RNM tany amin’ny 90 taona lasa ary ireo tahirin-tsary sy tahirim-peo rehetra hatrizay sy ny fivoaran’ny fitaovana ao anatin’ny haino aman-jerim-panjakana, ary hapetraka ao anatin’io Mozea ho an’ny haino aman-jery etsy Anosy io. Hisy trano fandraisam-peo na “studio d’enregistrement” manaraka ny toetr’andro ihany koa ao anatin’io toerana vao harenina etsy Anosy io.
mercredi, 31 mars 2021 20:44
Mpanakanto ara-pilazantsara : Nodimandry i Ndriana Ramamonjy
Nolazoin’ny aretina Covid-19 efa andro maromaro izy. Efa nisy fihatsarana ny fahasalamany, saingy nihombo indray dia izao izy nodimandry izao. Ny tontolon’ny mozika sy hira ara-pilazantsara no tena nahafantarana an’i Ndriana Ramamonjy. Mpamoronkira izy sady mpitendry no mihira ihany koa. Nitondra ny anarany ny tarika nisy azy. Ny taona 2017 i Ndriana Ramamonjy no nankalaza ny faha-30 taona niakarany an-tsehatra.Maro koa ireo mpanakanto nampiany, toa an’i Fara Andriamamonjy, Hantatiana …
mardi, 30 mars 2021 07:51
Taa Tense : Nasondrotra ho eo amin'ny laharam-boninahitra Chevalier de l'ordre National Malagasy
Tontosa ny harivan'ny 29 martsa 2021 tetsy amin'ny Gymnase Couvert Akorondrano, ny fanondrotana ho eo amin'ny laharam-boninahitra Chevalier de l'ordre National Malagasy an'i Rajaonarivony Tsizaraina Nathalie Hortense na i Taa Tense. Nanatanteraka izany araka ny didim-panjakana laharana 2021-351 tamin'ny 26 Marsa 2021, araka ny fahefana nomena azy ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo. Niala teto Antananarivo io hariva io ihany ny nofo mangatsiakan’i Taa Tense ka nihazo avy hatrany an'i Fandriana, Amoron'i Mania ary handrasana ao Ambohibary Fandriana ny Talata 30 Marsa. Ny Alarobia kosa no hanatanterahana ny fanitrihana ny razana ao Ampotaka Ankafobalo, Kaominina Tatamalaza misy ny fasan-drazany. (Loharanom-baovao : MSK) (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 29 mars 2021 17:12
Taa Tense : Tonga nanolotra fehezam-boninkazo ny solotenan'ny Filoham-pirenena
Tonga nisolo Tena ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, androany 29 Martsa 2021, teny amin'ny Kianja mitafo Ankorondrano, nanolotra fehezam-boninkazo sy naneho ny Fiaraha-miory amin'ny fianakavian'i Taa Tense na i Rajaonarivony Tsizaraina ny Tale Jeneraly DGPP, misahana ny tetikasa ny Filoham-pirenena, Andriamatoa Augustin ANDRIAMANANORO sy ireo mpiara-miasa eo anivon'ny Fiadidiana ny Repoblika. Natolotra ary novakiana tamin'ny fianakaviana ny taratasy fiaraha-miory nosoratan'Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina ho fanomezam-boninahitra sy fiaraha-miory amin'ny fianakaviana manontolo. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 28 mars 2021 22:30
Taa-Tense : Nanafatra ny hilevina any Fandriana
Tanterahina ao amin'ny kianja mitafo Ankorondrano hatry ny tolakandro teo ny fiaretan-tory ho fanomezam-boninahitra sy fanaovam-beloma farany an'i Taa-Tense, ilay mpanakanto nindaosin'ny fahafatesana ny sabotsy hifoha ny alahady 28 martsa 2021 noho ny fahasarotam-piterahana. Hiala eto Antananarivo ny Talata 30 martsa ny nofomangatsiakany hiazo an'i Fandriana, Amoron'i Mania. Andrasana ao Ambohibary Fandriana ny talata. Ny alarobia no hatao ny fandevenana ao Ampotaka Ankafobalo, misy ny fasan-drazany, ho fanatanterahana ny hafany fahavelony. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 28 mars 2021 12:48
Tontolon'ny kanto : Nodimandry i Taa Tense
Banga ny tontolon'ny kanto malagasy. Nindaosin’ny fahafatesana ny sabotsy hifoha ity alahady 28 martsa 2021 ity i Rajaonarivony Tsizaraina Nathalie Hortense fantatra amin'ny anarana hoe : Taa Tense. Avy teraka izy no izao namoy ny ainy izao. Azo kosa ilay zaza.
jeudi, 25 mars 2021 20:58
Sary : MSK
Tarika Mahaleo : Notolorana ny mari-boninahi-pirenena ambony indrindra
Notoloran’ny fitondram-panjakana ny mari-boninahi-pirenena ambony indrindra dia ny « Grand-Croix de 2ème Classe de l’Ordre National Malagasy » izy telo lahy mbola velona ao amin’ny Tarika Mahaleo sy ny archivisten’izy ireo araky ny fanapahan-kevitry ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, avy amin’ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo, dia i : - Rabekoto Honoré Augustin na i Bekoto- Andrianaivo Charle Bert- Rasolofondraosolo Zafimahaleo na i Dama- Razafimamonjy Jean Baptiste Tonga nanolotra izany, amin’ny anaran’ny Filohan’ny Repoblika, ny Grande Chancelière de l’Ordre National Malagasy Madeleine Ramaholimihaso.
jeudi, 25 mars 2021 16:49
Fantatrao ve : Nahoana no mahafaty ny fihinanana Fano
Tortue de mer na fano no ahaizan'ny faritra amorontsiraka azy, dia biby arovana eto Madagasikara. Zava-maitso anaty rano no tena sakafony, na itony algue itony, ary any ambany ranomasina lalina no misy izany. Misy ihany koa izy mihinana trondro madinika ireny. Manatody izy ary afeniny ety an-tanety amoron-dranomasina mba ho foy amin'ny hafanan'ny tany, ary sokajiana anatin'ny fianakavian'ny biby mandady na reptile. Rehefa foy ny zanany dia mamonjy aingana ranomasina, maro no alain'ny olona, ohanin'ny biby hafa, ary hazain'ny vorona na ny atody na ny zanany vao foy. Tsy mahatratra 10% n'ny foy no tafita velona, fa lanin'ny vorona na ho anin'ny biby andranomasina hafa. Ny requin blanc na requin tigre na requin bouledogue no tena fahavalon'ny Fano, ankoatran'ny olombelona izay mihaza azy, na tafiditra anaty harato fanjonoana. Mbola kely izy dia mihinana algue betsaka, izay algue misy poizina kely, ka arakaraky ny fitombon'ny vatan'ilay fano no miangona tsikelikely amin'ny nofony ilay poizina antsoina hoe "Dinoflagelles".
dimanche, 14 mars 2021 19:53
Soamahamanina-Miarinarivo : Sady nankalaza ny Taombavao Malagasy no nitokana zava-bita
Lanonana roa sosona no nankalazaina androany teny Vohitra Misandratra, Kaominina Soamahamanina, Distrika Miarinarivo, Faritra Itasy. Teo ny fankalazana ny Taombavao Malagasy, izay nanandratana avo ny mahaMalagasy, narahina fanomezana ny santabary ireo olomanankaja. Nanamarika ny andro androany ihany koa ny fitokanana ny ivotoerana “Soa Mahamanina” hanomezana fanofanana ireo tantsaha. (Jereo Sary Tohiny)